Izizathu zokuba neJenali yoRhwebo -Funda ngokurhweba 2
Izizathu zokuba neJenali yoRhwebo
1 October 2019 | Ukuhlaziywa: 3 October 2019
Izizathu zokuba kutheni kufuneka ubeneJenali yokuRhweba
Ijenali yokurhweba ilog nje yayo yonke imisebenzi yakho yorhwebo. Ngokwesiqhelo, ijenali ibonelela ngesixhobo kubo nabaphi na abathengisi abanzima abafuna ukuzivavanya ngokwabo. Kodwa kubaluleke ngantoni ukugcina iphephancwadi elahlukileyo?
Ewe, unokucela izizathu zokugcina iphephancwadi kuba abadayisi banikezela iirekhodi zexesha langempela kwiintengiso. Ngaphandle koko, umthengisi unikezela irekhodi eligcina umkhondo wamandla okuthenga, inzuzo kunye nelahleko kurhwebo ngalunye, kunye nokusetyenziswa komda.
Nangona kunjalo, nangona umrhwebi ebonelela ngerekhodi, ukugcina iijenali linyathelo lokuqala lokuba nawuphi na umrhwebi abe nenzuzo kwimarike ye-forex. Nazi ezinye zezizathu zokuba kutheni kufuneka unedayari yokurhweba ngezinto ezimbi nezintle.
Njengoko ixesha lihamba, ijenali iya kuthi, ngamanye amaxesha ikunike imbali enembono. Ngaphandle kokunika isishwankathelo somsebenzi wakho wokurhweba, ikwabonisa imeko yeakhawunti yorhwebo. Ngokusisiseko, yenza idathabheyisi yeakhawunti yomrhwebi.
Ke ngoko, inika ithuba lokubuyela ngexesha kwaye emva koko umisele inani lamaxesha othengise ngawo, iibini zemali ezenze okusemandleni, ukuba nempumelelo kangakanani na kurhwebo, kunye nezo zinikezelo zilungileyo.
Ijenali iya kuthi ekugqibeleni ikulungele njengoko iya kukunceda uqinisekise indlela yakho. Iya kukunceda uqaphele ukuba intle inkqubo yakho xa utshintsha iimeko zentengiso. Ke ngoko, uya kuthi emva koko ube neempendulo kweminye yemibuzo enje ngokuba inkqubo yakho ikweyiphi na intengiso yentsingiselo, umahluko kumaxesha abekiweyo.
Uninzi lwabantu lunokucinga ukuba ijenali iya kuba neerekhodi zokuthengisa kuphela. Nangona kunjalo, ikwabandakanya ulwazi kwizicwangciso zakho zorhwebo ngalunye. Yinto eya kukuvumela ukuba uqwalasele urhwebo ngaphambi kokuthatha ngokukhawuleza.
Kuya kunceda ukumisela yonke iparameter ukuba ungene, ubungakanani bomngcipheko onokuwufumana, injongo yakho yenzuzo, kunye nendlela yokulawula inkqubo yokuthengisa ngokwakho.
Ke ngoko, ijenali yindlela nje yokurekhoda iingcinga zobuqu kodwa ngamanani uqobo kunye nokwenza ukuba kwenzeke. Basisiseko sokwenza isiseko sendlela yokurhweba yokuthengisa.
Kwakhona, ijenali yokurhweba inceda ukutshintsha indlela oqhele ngayo ukuba yonakalise ukuba sisakhiwo. Kwinkqubo yokutshintsha kwezicwangciso ziye kwezo zakhayo, ukuzithemba okuphezulu kuyakhiwa. Ngelo xesha ngoku, awuyi kuziva ngathi bekungakhethiyo kunye nentengiso enenzuzo.
Ngaphandle koko, iilahleko ziya kubonakala ngathi zicwangcisiwe, yiyo ke loo nto awuyi kuva ilahleko njengokuba ungoyena uphulukeneyo ngokwenene.
Ekurhwebeni kwangaphambili, ukuzithemba kuyo yonke into, kwaye nje ukuba uphumelele, uya kufuna ukuphumelela kwakhona, kodwa xa ulahlekile, uloyiko kunye noloyiko luthatha indawo, okuyingozi. Ke ngoko, ijenali iyanceda ukuqokelela iinkcukacha-manani ukulungiselela ukucwangciswa kokuphumelela.
Iingcamango eziphambili zeJenali
Kuyacaca ngekristale ukuba ijenali yorhwebo ibalulekile kwi-forex. Ijenali iyacetyiswa ukuba isethwe ngendlela eya kuthi ifezekise iikhonsepthi ezimbini ezibalulekileyo. La magama abandakanya;
Kuya kufuneka ibe nekholamu ngokulandelelana kwayo yonke imisebenzi onokukwazi ukuyenza kunye nokudibanisa ukuze ube nerekhodi epheleleyo yemizamo yakho. Kuxhomekeka kubuchule bakho, unokuqesha iphepha elibalaseleyo elenza umsebenzi omninzi kuwe.
Kufuneka kwakhona kubekho ukuprintwa kwetshathi ngqo esetyenzisiweyo ukumisela urhwebo, olubonisa inqanaba lokungena, inqanaba lokulahleka kokuyeka, kunye nenqanaba lenzuzo. Ngaphezu koko, kufuneka uphawule izizathu zokwenza urhwebo.
Kuya kufuneka usoloko uqaphele ukuba iindlela zorhwebo okanye inkqubo esetyenziswayo akufuneki ixutywe. Gcina iphephancwadi ngalinye lihlukile ukuba uneendlela ezininzi zokurhweba.
Ukuzithemba kuyafuneka kurhwebo lwe-forex, kwaye kuyakufika xa usazi malunga nokulindelwa kwenkqubo yakho. Ukwenza urhwebo luloyiko okanye uloyiko kungakhokelela kwilahleko, ngokuqinisekileyo ongayilandelanga.
Ke ngoko, umkhwa wakho wokuqala wokurhweba kufuneka wenze ijenali eya kuthi ibaluleke kakhulu kurhwebo lwakho. Nje ukuba wenze inkqubela phambili, uya kuthi emva koko uqaphele ukuba iijenali zorhwebo zezonahlobo lokwenyani kunye nabacebisi ababalaseleyo.